पर्यटक सबैभन्दा बढी नेपालमा सुरक्षित छन् : योगेश भट्टराई, मन्त्री पर्यटन – Rajdhani Daily
पर्यटक सबैभन्दा बढी नेपालमा सुरक्षित छन् : योगेश भट्टराई, मन्त्री पर्यटन
नेपाल भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्री योगेश भट्टराई अस्ट्रेलिया पुगेका थिए । उनको शुभारम्भ कार्यक्रम विवादमुक्त रहन सकेन । सञ्चारमाध्यममा अनेकन कुराहरु आए, ती सबै अफाह भएको मन्त्री भट्टराईले कुराकानीका क्रममा बताए । भएको के थियो भन्ने वास्तविकता सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न राजधानी डेलीका लागि तक्दीर अधिकारीले मन्त्री भट्टराई कुरा गरेका थिए । तिनै कुराकानीको सम्पादित अंश :
० विदेशस्थित भ्रमण वर्षको शुभारम्भमा पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो नि ?
– त्यस्तो केही पनि भएको छैन, अस्ट्रेलियामा एकदमै राम्रो कार्यक्रम भएर शुभारम्भ भयो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को राम्रो प्रचार प्रसार भएको छ । यसलाई अस्ट्रेलिया सरकार र जनताले स्वभाविक र राम्रो ढंगले लिएका छन् । विश्वभरिका मानिसले नेपाल भ्रमण वर्षको सूचना पाएका छन् । नेपालका बारेमा थप जानकारी विश्व समुदायलाई प्राप्त भएको छ । जसले गर्दा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
० नेपाल भ्रमण वर्ष शुभराम्भ कार्यक्रम अस्ट्रेलिया उपयुक्त थियो ?
– अस्ट्रेलिया मात्र होइन, सबै ठाउँमा उपयुक्त छ ।
० अस्ट्रेलियाको ट्राभल एडभाइजरीमा नेपाल अझै जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको छ नि ?
– नेपालमा केही पनि जोखिम छैन, पर्यटक सुरक्षित छन् । पर्यटक नेपालमा सबैभन्दा सुरक्षित छन् ।
० सरकारी वेभसाइटमा जोखिम नै लेखिएको छ त ?
– त्यसलाई हामी कूटनीतिक च्यानलबाट कुराकानी अघि बढाउँछौं ।
० अस्ट्रेलियाबाट शुभारम्भ त भयो । के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
– अस्ट्रेलियामात्र होइन, विश्वका सबै देशहरु जहाँ नेपाली दूतावास छन्, कूटनीतिक नियोग छ र, जहाँ हाम्रो एनआरएनका साथीहरु हुनुहुन्छ, सबै ठाउँबाट नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुभारम्भ भएको हो । मेरो उपस्थितिमात्र अस्ट्रेलियामा भएकोे हो । म उपस्थित नभए पनि विश्वका धेरै ठाउँमा एकैसाथ यसको शुभारम्भ भएको छ ।
० विश्वका कुन–कुन स्थानमा एकै साथ शुभारम्भ भयो ?
– अघि नै भनिहाले, सबै ठाउँमा एकै साथ शुभारम्भ भयो । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, भारत, चीन, कोरियालगायत धेरै देशमा भयो । सबै देशको नाम म यहाँ उल्लेख गर्न सक्दिनँ । नेपाली दूतावास र नियोग भएका सबै ठाउँबाट शुभारम्भ भएको छ । नियोग नभएको ठाउँमा गैरआवासीयय नेपाली संघका साथीहरुले आफ्नो ढंगले विश्वका झन्डै २ सय सहरमा एकै साथ भिजिट नेपाल २०२० को शुभारम्भ गरेका छन् ।
० अस्ट्रेलियाका उच्च पदाधिकारीले नेपाल भ्रमण किन गर्दैनन ?
– अब हामी दुई देशबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको आदान–प्रदान गछौं । अरु लेबलमा पनि भ्रमण आदान–प्रदान हुनेछ । अस्ट्रेलिया र नेपालबीच सिधा हवाई सम्पर्क हुनुपर्छ भन्नेबारे छलफल भएको छ । यस पटक मेरो भ्रमणमा यस विषयमा धेरै राम्रो छलफल भएको छ ।
० हवाई सम्झौता कहाँ पुग्यो ?
– सन् २०१९ को अक्टुबरमा नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच हवाई सम्झौता भएको हो । योे सम्झौताले दुई देशबीच हवाई सेवा सुरु गर्ने बाटो खुला गरेको छ । हिजो बिहीबार हामीले राजदूतावास क्यानभेरामा अस्ट्रेलियाको नागरिक उड्डयनका प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छौं । दुवै देश सिधाहवाई सम्पर्कबाट जोडिनु पर्छ भन्ने कुरामा समान धारणा छ । यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर छलफल गरेका छौं ।
० अस्ट्रेलियाका नेपालीले सिधैं काठमाडौं अवतरण गर्न कहिले पाउँछन् ?
– त्यो छिटै हुनेछ । त्यस विषयमा हाम्रो छलफल सकरात्मक रुपले अघि बढिरहेको छ ।
० नेपाल एयरलाइन्सले नै त्यो सेवा दिने हो ?
– दुवै तर्फबाट हुनसक्छ । नेपाल एयरलाइन्स र अस्ट्रेलियाले पनि त्यो सेवा दिनेछ । त्यसको तयारी गर्नुपर्छ ।
० पूर्वाधार पुग्छ ?
– पूर्वाधारमा कुनै कमी छैन । अहिले पनि त्रिभुवन विमान स्थलबाट धेरै विदेशी फ्लाइट भइरहेको छ । दैनिक ५५–६० वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ । ३०–४० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान भरिरहेका छन् । अब नयाँ एयरलाइन्सले उडान सुरु गर्दा केही समय लाग्नु स्वभाविक हो ।
दैलेख । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिममा धमाधम छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको छ । सरकारले जबरजस्ती गोठ भत्काउनु नारीलाई न्याय दिलाएको महसुश संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय ...
प्रवचन तथा शुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौं । नेपाल तामाङ समाज र नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतारले संयूक्त रुपमा नजिकिदै गरेको ल्होछार पर्वको अवसरमा प्रवचन तथा शुभकामना आदन प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । प्रमुख अतिथि तथा लामागुरु थ...
आस्था राउतविरुद्ध ‘अभद्र व्यवहार’ कसुरमा पक्राउको अनुमति
काठमाडौँ । प्रहरी सङ्गठनलाई नै अपशब्द प्रयोग गरेको आरोप लागेकी गा
एमसीसी पारित भए नेपालले भारतला...
स्थानीय तहका कर्मचारीको अनिश्चित भविष्य (9,836)
उपसचिव बढुवाविरुद्ध सरकारकै अधिकृत सर्वोच्चमा, १ सय… (9,352)
चीनसँगको नाकामा नेपालको पहिलो बीओपी : सेनाको… (3,809)
साहसी उद्धारक (2,876)
दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि साइस्किम सर्भे सुरु (1,441)
नेकपामा पूर्वसमूह भन्ने नै छैन : प्रवक्ता श्रेष्ठ
गोदावरीबाट ७ लाखसहित ११ जुवाडे पक्राउ